Indlu enkulu enegadi kunye nephuli kufutshane neMadrid.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTommy
Indlu enkulu enegadi kunye nephuli kufutshane neMadrid. Imizuzu eli-10 ukuhamba ukuya kwiziko lelali. Indlu eqaqambileyo, enelanga efumaneka ngokulula kwimizuzu eli-10 yokuhamba ukuya kwindawo yelali yaseMiraflores de la Sierra. Iziko lelali lihamba ngeenyawo lineebhari ezininzi, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Amagumbi okulala ama-5 kunye namagumbi okuhlambela ama-3.
Indlu ibekwe kwindawo ephezulu yelali enembono phezu kwentlambo-esemazantsi ejonge ilanga imini yonke. Ukuhamba nje yimizuzu eli-10 kwiziko lelali apho uya kufumana ukhetho lweebha, iivenkile zokutyela kunye neevenkile. Ngenxa yokuphakama kwelali isetyenziswa ngabantu baseMadrid njengokubaleka kubushushu besixeko-iMiraflores idume ngokuba yibalcony ejonge eMadrid.
4.82 ·Izimvo eziyi-33
4.82 · Izimvo eziyi-33
IMiraflores yilali enabemi abamalunga nama-5000- esetyenziswa njengendawo yohambo lwemini ziiMadrileños ezininzi kunye nokubaleka kubushushu besixeko ehlotyeni. Iqhagamshelwe kakuhle eMadrid ngeebhasi rhoqo ngemizuzu engama-30 ukuya ePlaza Castilla ekumgca we-metro 1 kwaye ikusa ngqo ePuerta del Sol. Kukwakho noololiwe abaya ngqo ePuerta del Sol abasuka kufutshane neComenar Viejo (15kms)
Umbuki zindwendwe ngu- Tommy
I'm Irish. I live in Madrid
Ndazise ukuba loluphi ulwazi oludingayo kwaye ndiza kukunika endinako. Ndihlala eMadrid iminyaka engama-30 ke yazi kakuhle. Ndikhe ndaya e-Miraflores iminyaka engama-25 ukuze ikunike ulwazi oluninzi malunga nee-hants zasekhaya.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Miraflores de la Sierra